Degaano horleh oo laga qabsaday Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Degaano horleh oo laga qabsaday Al Shabaab
“Howlgalada sidii loo qorsheeyay ayay u dhaceen, Saaka waxaan la wareegnay Deegaanka Baladul Amiin, waxaan sidoo kale Al-Shabaab shalay ka saarnay Cumar Beer oo aheyd Meel ay dhigtaan Hantida ay ka dhacaan shacabka, Sabiib iyo Caanoole waxaan la wareegnay shalay Galinkii dambe, way iska cararayaan marka uu howlgal bilowdo, dad awood leh oo dagaalami kara maaha”.ayuu yiri Taliyaha Ururka 4-aad ee Danab.
Gaashaanle Cabdi raxmaan Sheekh Cumar ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Gaadiid ay ka carareen Shabaab iyo Dukumiintiyo.
Taliyaha Ururka 4-aad ee Danab Gaashaanle Cabdi raxmaan Sheekh Cumar (Jeeniqaar) ayaa sidoo kale sheegay in Howlgalo ay ka sameeyeen Deegaanada ay kala wareegeen ay kusoo arkeen Hormar la’aan dhinaca Waxbarashada, Biyaha iyo Nolosha qeybaheeda kala duwan.
MD Waare oo ka walaacsan Amniga Hirshabelle